Ukuhambelana kothando lweSagittarius - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kothando lweSagittarius
Abathandi beSagittarius bathathelwa ingqalelo ukuba bahambelana kakhulu neGemini kwaye ubuncinci buhambelana neScorpio. Ukuba luphawu lomlilo oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
Abo bazalwe kwi-Sagittarius babonisa izinto ezithile xa benxibelelana nolunye uphawu lweempawu zodiac kunye nazo. Nganye yezi zinto zidityanisiweyo zibangela ukuxoxwa ngokwahlukeneyo.
ukwahlukana njani negemini
Kwisicatshulwa esilandelayo siza kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kweSagittarius kunye neminye imiqondiso yeenkwenkwezi.
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neeAries
Le miqondiso mibini yomlilo ngumdlalo olula! Nangona kunokubonakala ngathi banokuvelisa uqhushumbo kuphela, ekuphela kohlobo lokuphakanyiswa kolu lwalamano luyilo kunye nezinto ezibonakalayo njengoko bobabini besabelana ngeenjongo zabo kwaye bebeka iingqondo zabo ezinamabhongo ekufezekiseni amandla abo njengesibini.
Unxibelelwano kunye nokuhamba ngokusondeleyo kwaye akukho lifu esibhakabhakeni okoko nje bobabini beqonda ukuba basebenza ngcono njengeqela kunedabi le-egos.
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neTaurus
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo olula! Bobabini bayonwabela iziyolo ezilula zobomi kwaye yinto nje yexesha ngaphambi kokuba bafumanise ukuba ubukho bomnye nomnye butyebisa njani ubomi babo.
Ulwalamano lwabo kunokwenzeka ukuba lujolise ekuzuzeni izinto ezibonakalayo kwaye kuncinci kwimpilo yokomoya kodwa ekugqibeleni kuxhomekeke kubo apho bahambisa khona izinto.
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neGemini
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Isithembiso sovuyo olukhulu kunye nokuzonwabisa njengoko nobabini ninikwe ubomi.
I-Gemini iyaziqhelanisa ngokulula neemfuno zeSagittarius yomlilo, ngelixa eyokugqibela iyonwabela impepho yomoya omtsha obonelelwe.
Nangona kunjalo naka ingqalelo ukuba uhambo lobomi alwenzelwanga ziziphazamiso kunye nokuzonwabisa kunye nozinzo ayisiyiyo eyona nto iphambili kuni nobabini kwaye oku kuya kukhokelela kwimpikiswano ebalulekileyo ukuba ishiywe ingenakuphikiswa.
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neCancer
Olu phawu lwamanzi kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo ongenakwenzeka! Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lwamanzi lolunye loludibaniso olunamandla.
Banokonwaba kunye kodwa kufuneka bakhumbule ukuba bahlala behamba kumacala ahlukeneyo. Uphawu lomlilo, kufuneka lufunde ukuba novakalelo kunye nokhathalelo kuba yile nto uphawu lwamanzi ngokwenkcazo ludinga.
Kwelinye icala uMhlaza kufuneka uqale uhlengahlengiso kwaye ube bhetyebhetye xa kufikwa kwiminqweno kaLeo. Ngokumalunga nezothando, bobabini bayamnkela kwaye banokwenyama ukuya kwinqanaba elithile.
Uphawu lweZodiac ngoJanuwari 28
Ukuhambelana kweSagittarius kunye noLeo
Le miqondiso mibini yomlilo ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Ngamanye amaxesha ubuntu bakho obuneenkani buza kwisivumelwano kwaye izinto zihamba zilungile, ngelinye ixesha nesona sigqibo sincinci kufuneka usenze sibe yeyona nto inzima emhlabeni.
Nokuba zingaya kweliphi icala izinto, ngokuqinisekileyo oku kukudibanisa umlilo!
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neVirgo
Lo mqondiso womlilo kunye nophawu lomhlaba ngumdlalo ongenakwenzeka! Bobabini bayonwabela iziyolo ezilula zobomi kwaye yinto nje yexesha ngaphambi kokuba bafumanise ukuba ubukho bomnye nomnye butyebisa njani ubomi babo.
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neLibra
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo olula! ILibra inayo yonke into eyenziwayo ukuvutha amadangatye eSagittarius ngamaxesha afanelekileyo ngelixa iSagittarius isazi ngokuchanekileyo ixesha lokubeka amandla kwiLibra ezolileyo nebaliweyo.
Ngandlela thile bobabini ngokungazami bafumana izixhobo zokwenza izinto zisebenze kwaye bade bafeze ezinye zeenjongo zabo ngokusebenza kunye.
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neScorpio
Banokonwaba kunye kodwa kufuneka bakhumbule ukuba bahlala behamba kumacala ahlukeneyo. I-Sagittarius kufuneka ifunde ukuba novakalelo kunye nokukhathalela kuba yile nto uphawu lwamanzi ngokwenkcazo ludinga.
Kwelinye icala iScorpio kufuneka iqale ukuhlengahlengisa kwaye ibhetyebhetye xa kufikwa kwiminqweno yeSagittarius. Ngokumalunga nezothando, bobabini bayamnkela kwaye banokwenyama ukuya kwinqanaba elithile.
ukuthandana njani nendoda eyi-aries
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neSagittarius
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neCapricorn
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neAquarius
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo olula! U-Aquarius unayo yonke into ayifunayo ukuvutha amadangatye eSagittarius ngamaxesha afanelekileyo ngelixa iSagittarius isazi ngokuchanekileyo ixesha lokubeka amandla ku-Aquarius ezolileyo nebaliweyo.
Ukuhambelana kweSagittarius kunye nePisces
Kwelinye icala iiPisces kufuneka ziqale ukuziqhelanisa kwaye zibhetyebhetye xa kufikwa kwiminqweno yeSagittarius. Ngokumalunga nezothando, bobabini bayamnkela kwaye banokwenyama ukuya kwinqanaba elithile.
I-Taurus Indoda kunye ne-Aries Woman Ukuhambelana okungapheliyo
umhlaza indoda kunye pisces umfazi besilwa
iingcebiso zesondo nomntu we-taurus
I-taurus yabasetyhini kunye ne-libra yamadoda
ukuhambelana kweempawu zamanzi nomoya
Scorpio indoda kunye nomfazi wanamhlanje
abantu abazalwe ngo-septemba 19